Mareykanka oo liiska argagixisada adduunka ku daray hoggaamiye ku xigeenka maleeshiyada Al-Shabaab - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo liiska argagixisada adduunka ku daray hoggaamiye ku xigeenka maleeshiyada Al-Shabaab
January 6, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Maleeshiyada Al-Shabaab. [Xigashada Sawirka: AP]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa liiska argagixisada adduunka ku daray hoggaamiye ku xigeenka maleeshiyada Al-Shabaab.
Bayaan kasoo baxay Waaxda Arrimaha Dibada Mareykanka shalay oo Jimce ahayd ayaa lagu sheegay in Abuukar Cali Aadan la xayiray dhammaan hantidiisa, waxaana laga mamnuucay muwaadiniinta Mareykanka in ay wax xiriir ah la sameeyaan isaga.
Abuukar Cali Aadan oo ah nin aan aad loo aqoon ayaa Mareykanku ku eedeeyay in uu abaabulay weeraro argagixiso.
May 2, 2018 Gabar Soomaali ah oo katirsan haayada WHO oo lagu dilay Muqdisho
March 25, 2018 Xubno katirsan Al-Shabaab oo lagu xukumay xabsi
June 15, 2018 Madaxweyne Cabdiweli: Puntland diyaar ayay u tahay xoreynta gobolka Sool
April 30, 2018 Madaxweyne Farmaajo oo tagay Beledweyne
Puntland oo isku diyaarinaysa soo dhaweynta Madaxweyne Farmaajo
Ugu yaraan todobo qof oo ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay banaanka hore ee dekada weyn ee Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan todobo qof ayaa ku dhimatay dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax gaari lala beegsaday afaafka laga galo dekada weyn ee Muqdisho maanta oo Axad ah, sida ay xaqiijiyeen [...]
Hoggaamiyaha golaha Oromada oo sheegay in dagaalka dib u eegida dhulka uu Ethiopia u jihayn karo dagaal sokeeye
Washington-(Puntland Mirror) Banaanbaxyo waa-weyn oo ay ka qaybqaateen boqolaal qof ayaa ka dhacay dalka Ethiopia asbuucyadii lasoo dhaafay. Merera Gudina, oo ah hoggaamiyaha golaha dadka Oromada, oo wareysi siiyay wakaalada wararka Reuters isagoo jooga magaalada [...]
Koox ciidamo Turki ah ayaa sheegay in ay talada dalka la wareegeen, iyadoo meelaha muhiimka ah ee Istanbul askar la dhigay, diyaarado jog hoose ku duulayana ay dul heehaabayaan caasimada, Ankara. Bayaan laga sii daayay [...]